Sahel, ka cagaaran mahadnaqa kululaynta badda Mediterranean | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Isbedelka Cimilada, Ciencia
Planet Earth waa meere nool, aad iyo aad u badan oo marka heer kulka hal meel ka kaco, ay ku dhacaan mid kale si loo ilaaliyo dheelitirka kuleylka adduunka. Wax la mid ah ayaa ka dhici doona Mediterranean iyo Sahel: 20-kii sano ee la soo dhaafay, gobolka Mediterranean wuxuu la kulmayay koror heerkulka iyo hoos u dhaca roobka, roobab u muuqda inay u guureen Saaxil, sida lagu muujiyay daraasad lagu daabacay joornaalka Isbeddelka Cimilada, oo uu diyaariyey Machadka Max Planck ee Saadaasha Hawada.
Kordhinta heerkulka Mare Nostrum dartiis, qoyaanka gaadha xadka koonfureed ee Sahara bilowga wabiga Galbeedka Afrika ee Juun sidoo kale wuu sarreeyaa, sidaa darteed Sahelku wuxuu noqdaa mid cagaaran.
Cimilada Sahel waa mid aad u isbeddel badan, oo ay ku badan tahay monsoon Galbeedka Afrika, taas oo keenta roobab bilaha Juun ilaa Sebtember. Sanadka intiisa kale, abaartu waa mid aad u daran. Dhulku wuu ka kulushahay in ka badan badda xilliga xagaaga, maadaama qorraxdu ku jirto meel sare oo, marka lagu daro, badduhu si dhakhso leh uma soo nuugaan kuleylka sida dhulka. Hawada ayaa ka kacda dhul weynaha, marka ay sidaas sameyso, waxay soo saartaa qoyaan ka yimaada badda oo aada dhanka Sahel
Awoodda monsoonku way is beddelaysay waqti ka dib. Intii u dhaxeysay sanadihii 1950 iyo 1960, Sahel waxaa soo maray xilli qoyan; 1980-yadii, abaartu waxay ahayd mid daran oo in ka badan 100.000 oo qof naftooda ku waayeen. Tan iyo markaas, roobkii ayaa soo noqday.
Sababta sida ay qabaan saynisyahannadu waxay tahay Kulaylinta Mediterranean. Si loo gaaro gabagabadaas, xaalado kala duwan ayaa lagu bartay iyadoo la adeegsanayo jilitaanno kala duwan. Sidaa darteed, waxay awoodeen inay ogaadaan in haddii heerkulka aagga Mediterranean uu sii ahaado mid joogto ah ama ka yar, roobab ka dhaca Sahel ma kordhayaan; taas cagsigeeda, haddii badda Mediterranean-ka ay kululaato, Sahel roobab badan ayaa ka da'a
Tani waa sababta oo ah heer kulka oo keliyi ma kaco, laakiin sidoo kale qoyaanka, taas oo ah waxa "dhaqaajinaya" monsoon Galbeedka Afrika. Sidan oo kale, qaybtan Afrika, waxay ku raaxeysan karaan roobab badan bilowga xilli-roobaadka.
Waad akhrisan kartaa daraasadda Halkan (Ingiriisiga).
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Sahel, ayaa ka cagaaran mahadnaq ahaan kululeynta badda Mediterranean-ka
Kaymaha ceelka loo yaqaan 'boreal forest' ayaa xal u heli kara xakameynta isbeddelka cimilada